केसी अनसन बसेको १८ औँ दिनः साँझबाट उपचार नगर्ने चिकित्सकको चेतावनी « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
केसी अनसन बसेको १८ औँ दिनः साँझबाट उपचार नगर्ने चिकित्सकको चेतावनी
काठमाडौंः चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै प्रा.डा. गोविन्द केसी आमरण अनसन बसेको आज १८ औँ दिन पुगेको छ ।
अनशनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै जाँदासमेत सरकार गम्भीर नभएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइराखेको छ ।
डा. केसीको स्वास्थ्य विग्रदै गएकाले सकेसम्म आज अनसन तोडाउने योजनामा स्वास्थयमन्त्री थगन थापा सक्रिय भएका छन् । थापाले मंगलबार केसीसँग भेट गरी स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए ।
भेटमा समस्या समाधानका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत मन्त्री थापाले केसीसँग राय लिएका थिए । सरकारले आज जसरी भएपनि अनशन तोडाउने गरि काम गरिरहेको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शान्तबहादुर श्रेष्ठ बताएका छन् ।
हिजोको भेटमा भने मन्त्री थापाले उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँगै वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । केसीका मागका सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक भए पनि प्राविधिक कारणले कुरा मिल्न नसकेको वार्ता टोलीमा संलग्न एक सदस्यले जानकारी दिए ।
सरकारले डाक्टर केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न भन्दै गएको शनिबार शिक्षा सचिव श्रेष्ठ र स्वास्थ्य सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेती सम्मिलित टोली गठन गरेको थियो । सरकारी टोलीले अनसनरत केसीसँग् पटकपटक वार्ता गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन् ।
वार्ता निष्कर्षमा नपुग्दा डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएक छन् । केसीका मागका सम्बन्धमा सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको भन्दै त्रिवी शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सक संघले माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएका छन् ।
सो अवधिमा केसीका माग सम्बोधन नभए सबै सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत चिकित्सकले गरिसकेका छन् । बुधबार साँझसम्म केसीका माग सम्बोधन नभए सबै सेवा ठप्प हुने उनीहरुको चेतावनी छ ।
आवासीय चिकित्सक संघले मंगलबार साँझ विज्ञप्ति निकालेर अनशनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर बन्दै गएपछि यस्तो अल्टिमेटम दिएको हो ।